Uma uhlela ukuba bachitha iholidi lesingeke resort Turkish of Side (Side), Kamelya Umhlaba lo Holiday Village 5 * kungaba inketho kakhulu ukuze uhlale. Phela, lapha izivakashi ukunikela indawo yokuhlala ntofontofo kanye nezinsizakalo ze-ikilasi eliphakeme.
Leli hhotela itholakala khona ogwini, ukusuka enkabeni yedolobha Side eziyisishiyagalombili kuphela. Isikhumulo sezindiza ingamakhilomitha angu-55.
Isithombe kanye nencazelo
Ihhotela Kamelya Umhlaba Holiday Village 5 * uhlukanisa Insimu nakwezinye izakhiwo ezimbili ehhotela okuqondene kunethiwekhi efanayo "Camellia WORLD" - "Fulya Resort & Spa" futhi "Celine Resort & Spa". Yonke ingqalasizinda, ngaphandle amakamelo nezindawo zokudlela, kuyinto evamile. Ezezindlu Isikhwama "Holiday Village" liqukethe 556 amafulethi kule mikhakha elandelayo: amakamelo ejwayelekile, Suites, umndeni kanye Deluxe. amakamelo ayisithupha ngokukhethekile ahlomele yokuhlala ukhululekile kwabantu abanokukhubazeka.
Ngaphakathi eziyinkimbinkimbi ehhotela kukhona zokudlala, izinkantolo tennis, amachibi okubhukuda, amanzi ipaki, zokudla, nemishayo, spa, ukuqina isikhungo, club mini, ikamelo lengqungquthela, izitolo, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo nokuningi. Ngaphezu kwalokho, ihhotela inezidingo ububanzi sandy beach yayo, ifakwe konke okudingekile.
Side Kamelya Umhlaba Holiday Village 5 *: Russian isihambi Izibuyekezo
Njengoba wazi, namuhla, abantu abaningi indlela olunzulu kakhulu kukhethwa ehhotela kanye yokubhuka kokubili ekhaya aphesheya. Ngakho, abahambi hhayi kuphela ukuthi babonisane abaphathi travel ejensi nokutadisha incazelo esemthethweni ye ehhotela, kodwa futhi zama bajwayelane inani elikhulu kunawo kungenzeka imibono yalabo abaye kakade wakwazi uvakashela indawo yabo kwezinhloso zenzuzo. Lokhu kuvumela ngisho phambi uhambo lokwenza esigcwele futhi okusondele kakhulu kuya real isimo isithombe ehhotela. Phela, bonke abantu ufuna ukuqaphela izinzuzo nezingozi ehhotela ukuthengwa uhambo. Kule ndaba, sinqume ukuphungula ezinye inkinga futhi ukukunikeza ukuhlola amazwana generalized abantu bakithi abayibekile Usanda bachitha iholidi labo ehhotela ezinhlanu inkanyezi Side "Camellia WORLD Holiday Village". Lapho ubheka ikusasa, siphawula ukuthi iningi Izibuyekezo akhayo, ngoba cishe zonke izivakashi basutha nokukhetha kwethu futhi ngeke khumbulani ukuze ubuyele kule impahla futhi. Kodwa sifunda okwengeziwe yonke imininingwane.
Ukwahlulela nge amazwana, shiya bakithi mayelana iholide yabo isakhiwo ehhotela Kamelya Umhlaba Holiday Village 5 * (Side, Turkey), wathembisa ukubanika yokuhlala, iningi basutha. Ngaphezu kwalokho, izivakashi eziningi e Izibuyekezo zabo bathi ngokuvamile ixazululwe ngisho in the amafulethi isigaba ezibizayo okungaphezu kokuphonswe yibo wakhokhela ukubhuka. Wonke amakamelo njengoba izivakashi inothi nazi ivulekile, elikhanyayo futhi ahlotshiswa kahle. Basuke kahle elinempahla yasendlini, nge ubuchwepheshe besimanje. Cishe zonke amakamelo ivulekile balcony kwanikeza. Yokuhlanza Kwenziwa nsuku zonke futhi izinga kuhle okusezingeni eliphezulu. Selineni, ngokuvumelana bezwe kwethu, washintsha kabili ngesonto. Amathawula nazo olusha, uma usebenzisa niphonsa phansi. Kulo, izivakashi kuqashelwe ukuthi nezincekukazi futhi njengoba kudingekile restock okugeza kanye zokugeza egumbini lokugezela futhi okuqukethwe minibar. izivakashi eziningi futhi wazi ukuthi ihhotela has internet ezinhle kakhulu engenantambo. Ukufinyelela liphinde mahhala. «Izinhlanzi»-Wi-Fi, ngokuvumelana izakhamizi, ku insimu yonke eyinkimbinkimbi ehhotela, ngisho ogwini.
Kunemininingwane ephelele yezizathu nendawo
Ngokuphathelene endaweni yayo Kamelya Umhlaba Holiday Village 5 * Izibuyekezo mayelana nokuthi iziphi izinhlelo izincwadi esizifundayo, ke izivakashi thola nje omkhulu. Ngokwesibonelo, zikukhombisa ukuthi kuvamile ukuba amahhotela ezintathu kunethiwekhi efanayo. Izivakashi like yokuthi ungaya noma iyiphi indawo ehhotela bese kwamanje ujabulela zonke izingqalasizinda, kwasinda zokuhlala nezindawo zokudlela. Futhi, ukuhlaziya yakhe abahambi bathi lokhu eziyinkimbinkimbi has konke okudingayo - kusukela spa kanye nezemidlalo ukue izitolo, a salon ubuhle kanye ngisho emakethe.
Izivakashi ziyajabula uqaphele iqiniso lokuthi "Camellia WORLD Holiday Village" itholakala usondele ngokwanele sezindiza. Ngakho, ngokwale ndlela abahambi, endleleni esuka ethekwini emoyeni bathatha imizuzu engaba ngu-40, okuyinto a plus enkulu uma ojikelezayo nezingane.
Kuyinto umbuzo ezimweni eziningi okubangela impikiswano enkulu phakathi izivakashi, ngisho amahhotela aphambili. Nokho, ngaphambi kokuba sikwazi Kamelya Umhlaba Holiday Village 5 * waphunyuka kube senkingeni efanayo. Ngakho-ke kungaba ngokuthi ukukhipha uyabukeka umthetho. Ngakho, iningi izivakashi basutha kakhulu ne ezihlukahlukene imenyu Izinga lokudla bacela zona. Abaningi uyajabula yokuthi ungahlala udle inyama, izinkukhu, inhlanzi, ezihlukahlukene ukudla okulula, salads. Njalo etholakalayo babe amaswidi okumnandi kanye nezithelo ezintsha. Ngaphezu kwalokho, ungase zithokozise a ukudla okusheshayo at the bar isidlo. Ikhwalithi iziphuzo abathi bakithi kungukuthi icala.
Le nto ku ukubuyekezwa kanye wathola izilinganiso emihle kuphela. Ngakho, ngokuvumelana bakithi, ebhishi lapha likhulu kakhulu, anesihlabathi inakekelwa kahle. Ngisho naphezu kweqiniso lokuthi ungumnikazi amahhotela ezintathu nje, endaweni ingaphezu kokwanele. Akekho izivakashi akhononda yokuntuleka sunbeds.
Iphesenti elikhulu izivakashi ayethanda ukuchitha isikhathi ogwini futhi phezu ithala elilodwa amachibi eziningana, okuyinto zitholakala ensimini ka "Camellia WORLD Holiday Village". Nokho, eziningi izakhamuzi esikanye ukubuyekeza kwabo uyabalisa yokuthi ilanga loungers lapha (njengoba kuqhathaniswa ebhishi) kuyinto elibanzi esingaphansi uzimisele esizobahlalisa kuyo. Ngakho abanye izivakashi baphoqeleka ukuba uvuke ekuseni kakhulu ngaphambi kokudla kwasekuseni ukuthatha lounger. Kungenjalo kahle uhlale ngasechibini wena cishe ukuphumelela. Lesi simo kabanzi kubonakale njengendlela lokususa, futhi esesho ukuthi wethemba ukuthi ekuphathweni ozonquma daba esikhathini esizayo esiseduze.
Nokho, ngaphezu eziphumulele ngasechibini, esizeni ungathola eziningi neminye imisebenzi. Ngakho, izivakashi Ukugubha kakhulu zemidlalo, epaki amanzi obuhle amanzi amaslayidi izingane kanye nabantu abadala, spa.
Izibuyekezo esiningi omuhle futhi izithombe wathola Kamelya Umhlaba Holiday Village 5 *. Ngakho, ngokuvumelana abahambi, le Animators benza umsebenzi emihle nemisebenzi yawo. Emini becelwa ukuba wonke umuntu ahlanganyele emisebenzini ezemidlalo, ukudlala ithimba imidlalo. Kusihlwa, njengoba Animators kanye guest Abaculi ahlele kakhulu ukuzijabulisa imibukiso. Izivakashi eziningi bayakujabulela ukuvakashela lezi zenzakalo.
Abagibeli abafika ku ukuphumula kanye nemindeni yabo yonke, futhi uyakujabulela uqaphele ukuthi ihhotela wacabanga mayelana izivakashi omncane. Ngakho-ke, kuzo yona ifakwe amachibi ezincane, amaslayidi amanzi, mini-zoo. Ngaphezu kwalokho, ihhotela has a izingane club, okuyinto, ngokusho abazali babo, abantwana babo abajabulayo ukuhamba, futhi kusihlwa labetibambile mini-disco. Futhi e yokudlela kukhona njalo ukuthi kungenzeka ukusebenzisa highchair.
Ngokusho bakithi, izisebenzi kuleli eziyinkimbinkimbi ehhotela "Camellia WORLD Holiday Village" kufanele simdumise eliphakeme. Ngakho, ngokuvumelana kubo, izisebenzi lapha ngobungcweti, friendly futhi ikukhonzile. Nokho, abantu bethu baye baphawula ukuthi iningi abasebenzi ehhotela akakhulumi ngesiRashiya. Iqiniso lokuthi ingxenye enkulu yomsebenzi izivakashi lapha ewela izivakashi ezivela eJalimane, eFrance, e-Italy nakwamanye amazwe aseYurophu. Kodwa uma kunesidingo, njalo ungathola abasebenzi abakhuluma isiRashiya.
Ihhotela Aqua Hotel Resort & Spa Indawo 4 *: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Amahhotela e-Krasnaya Polyana: izithombe, izinombolo zocingo, kanye nokubuyekeza
Ihhotela Chalston Beach Resort Indawo abantu 3 * (Goa): ulwazi olujwayelekile, izithombe, izibuyekezo zezivakashi
Ifa Issekeshev: Biography emfushane kwelinye kwababusi wezwe ngempumelelo kakhulu
Ukuthinta buthule netinchazelo tawo
Refilling inki cartridges
American ifilimu "Anna Karenina": abalingisi, izindima
Indlela ukuvala izaziso "Ofunda nabo" ekhompyutheni ifoni
Umthelela yezenzo zesintu ubunjalo izwe lazo lendabuko namuhla futhi kwetikhatsi
Uhlolojikelele esihlalweni okusezingeni eliphezulu Chicco Polly
Ifomu Airborne. iyunifomu yamasosha Russian Airborne Umbutho
Unconventional umhlobiso - tattoo eminweni yakhe